Kooxda Liverpool oo xiiseynaysa xiddiga ka ciyaara horyaalka Premier League, kaasoo ay u aragto bedelka Jadon Sancho – Gool FM
Kooxda Liverpool oo xiiseynaysa xiddiga ka ciyaara horyaalka Premier League, kaasoo ay u aragto bedelka Jadon Sancho
Haaruun July 19, 2020
(Liverpool) 19 Luulyo 2020. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Watford ee Ismaila Sarr ayaa la soo warinayaa inuu diiradda u saaran yahay Tababaraha naadiga Liverpool ee Jurgen Klopp suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Sarr ayaa Kooxda Watford kaga soo biiray Rennes weli lacag rikoorka kooxda ah oo dhan 30 milyan oo gini sanadkii la soo dhaafay, wuxuuna si tartiib tartiib ah ula qabsaday kubadda cagta Premier League, isagoo dhaliyay shan gool iyo saddex kale caawiye ka ahaa.
Labo ka mid ah gool caawinta uu sameeyey ayaa yimid kulankii naadiga Hornets ay sida layaabka leh guul 3-0 ah kaga gaartay Liverpool bishii Febraayo, waxaana sida ay warinayso Jariiradda The Mirror, 22-sano jirkaan qantay indhaha Klopp.
Warbixinta ayaa tilmaamaysa in Reds ay sii wadday la socodka horumarka xiddiga heerka caalami ee dalka Senegal, isla markaana ay u dhaqaaqi karto dhammaadka xilli ciyaareedka.
Sarr ayaa la sheegay in loo arko mid ka qiimo jaban xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, kaasoo lagu qiimeeyo ku dhawaad 100 milyan oo gini ayna si weyn u xiiseynayso kooxda Manchester United.
Barcelona oo xilli ciyaareedkan guul weyn kaga soo xiratay horyaalka La Liga kaddib markii ay ka adkaatay Deportivo Alaves… +SAWIRRO